Nhau - Nei yangu Stainless simbi Grill Rusting?
Zvokudya zvekunze zvakagadzirwa nesimbi isina tsvina zvinoiswa pasi pemamiriro akawanda akaoma. Izvi zvinosanganisira mamiriro ekunze, kupisa, makemikari ekuchenesa makemikari uye zvikweshwa, pakati pezvimwe, izvo zvinoita kuti zvinyanye kubatwa nekuora uye makwapa. Kunyange kana zita rezvinhu simbi isina tsvina richiratidza kuti hakuna ngura, hapana zvinhu zvakawanda zvisingatani kuparadzwa. Kuchengetedza uye kugadzirisa nguva dzose kunodiwa kuwedzera hupenyu hwavo hwebasa. Stainless simbi grills muenzaniso weizvi. Zvichienderana nerudzi, simba uye pamusoro pesimbi isina tsvina, inogona kusvibiswa nemavara e ngura kana ruvara nekufamba kwenguva.
Humidity, kuwanda kwehunyoro uye mhepo ine munyu (semunzvimbo dzemahombekombe) inogona kukonzera ngura makwapa pamusoro pegrill, sezvinogona kunyura bleach uye mamwe machena ane chlorine.
Concentrated bleach nezvimwe zvinochenesa zvine chlorine zvinogona kukonzera ngura, ndosaka zvisingafanirwe kushandiswa simbi isina tsvina.
Chiutsi mafomu paunenge uchicheka, izvo zvinogona kupisa uye kubvisa ruvara rwesimbi isina tsvina.
Moto wegirisi unokonzeresa kuti pamusoro pesimbi isina tsvina isvibe, asi usaore zvinhu. Kugara kucheneswa kwenzvimbo yekubikira uye mukati megrill kunoderedza njodzi yemoto usingadiwe.
Cherekedza: Simbi isina ngura haina 'ngura' sesimbi yakajairwa apo tsvuku yeokisidhi layer inoumbwa pamusoro uye inoputika. Kana ukaona ngura, inogona kunge yakabva muzvidimbu zvesimbi (eg iron weol) yakaungana pamusoro pesimbi isina tsvina. Zvimedu izvi ndizvo zvinoita ngura kwete simbi isina tsvina pachayo.
NDOKUDZIVISA SEI GRILL YAKO KUSANGARA?
Grills inofanira kucheneswa mushure mekushandiswa kwega kwega kudzivirira ngura. Ita shuwa yekudzima zvinopisa gasi grill usati wacheneswa, uye shandisa bhurashi regrill kuti ubvise chero zvimedu zvingave zvakanamira kune magirati. Iwe unogona zvakare kufunga nezve kuchenesa ne bristle-isina grill bhurashi kuti udzivise chero waya bristles inouya yakasununguka uye inonamatira kune yako magirati.
Pamarasha emarasha, zviri nani kuachenesa achiri kupisa, uchishandisa bhurasho uye kumwaya mvura. Mushure mekuchenesa magireti uye nekutendera grill kuti itonhore, kanda madota asara kana marasha asara mugrill uye chenesa bhokisi rekubikira nemvura ine sipo yakapfava.
Ipe Yakadzika Yakachena Pese Pese
Ipfungwa yakanakawo kuita hutsanana hwakadzama nguva nenguva. Kuti uite kudaro, bvisa magirasi uye wochenesa nemhinduro yemvura inopisa, imwe kapu yesipo yedhishi, uye 1/4 kapu yesoda. Vanyudze kweawa uye wozotevera nebhurashi. Mushure mokunge grill yatonhora, pukuta magirasi pasi nemucheka wakapfava kuti ubvise chero chinogara chakanamatira-pazvokudya kana brashi bristles.
Zvadaro, chenesa grill's burners ne-non-abrasive cleaner uye jira. Iwe unozoda kuchengetedza madhireyi ekudonha akaoma uye akachena, sezvo anogona kunyanya kunetseka kune hunyoro kuvaka-up. Nebhurashi repombi, chenesa maburi ekupisa uye maburi ekupinza zvakare.
Usakanganwa kuchenesa kunze kwegrill yako nesipo yekuwachisa dhishi uye/kana porishi inoenderana nekunze kwegrill yako. Pasinei nezita rayo, kunyange "stainless" simbi inonyanya kukanganiswa nemarara uye ngura, zvichienderana negiredhi uye ukobvu hwesimbi.
Mafuta Grill Yako
Mushure mekuchenesa, pfekedza zvose gasi uye marasha magirasi nechidimbu chemafuta emuriwo kudzivirira chikafu kuti chisanamatira kwavari mune ramangwana. Kuita izvi kunobatsirawo kudzinga unyoro - uye saka ngura. Zvisinei, kuti uve wakachengeteka, usashandise aerosol can yemafuta emuriwo, sezvo magaba aerosol ave achizivikanwa kuti anoputika pedyo nemirazvo. Pane kudaro, pfeka rag ndiro nemafuta mashoma uye shandisa iyo kupfeka grill.
Ifukidze Uye Ufambise Mumba
Unyoro ndicho chinokanganisa chikuru chinopisa grill yako uye kuderedza hupenyu hwayo. Mushure mekunge mwaka wekugocha wapera, isa chivharo chakasimba chenaironi kana chevinyl chine jira rinoisa pamusoro pegrill yako.
Kana zvichibvira, fambisa grill inotakurika mumba kuenda kugaraji kana shedhi yakavharwa, kunyanya kana uchigara munzvimbo ine hunyoro hwepamusoro, kunaya kwemvura kana sinou. Kana iwe uchigara pedyo negungwa, nyatsochenjerera nezvekuchenesa uye kuvhara grill yako, sezvo yakakwirira yemunyu mumhepo inogonawo kuiparadza.
Nguva yekutumira: Nov-10-2021